Tag Archive for "उद्योग" - अन्तर्राष्ट्रिय जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो सुरु, प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसै सपना देखेपछि...
काठमाडाैं । नेपालमा पाइने बहुमूल्य रत्न, आभूषणको सम्भावना उजागार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल इन्टरनेशनल जेम एण्ड ज्वेलरी एक्स्पो–२०१९’ आयोजना गरिएको छ । खानी तथा भू–गर्भ विभाग र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले संयुक्तरुपमा लैनचौरस्थित खानी तथा भू–गर्भ विभाग परिसरमा आयोजना गरेको उक्त एक्स्पोमा नेपालमा पाइने बहुमूल्य रत्न, आभूषण, परम्परागत तथा आधुनिक गरगहनाको प्रदर्... थप पढ्नुहोस्
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्ष करीब स्थिर रहेको तयारी पोशाकको निर्यात चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमा भने वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तयारी पोशाकको निर्यात आठ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घले जनाएको छ । विगतका चार आर्थिक वर्ष तयारी पोशाक निर्यात पाँच अर्बकै हाराहारीमा स्थिर थियो । सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भने... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । मन्त्रीले प्रदेश २ मा सचिवमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्। प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई झापड हानेका छन्। सचिव झाले गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रममा आफ्नो एनजीओलाई छनोट नगरेपछि मन्त्रीले झापड हानेका हुन्। झाले आफ्नो एनजीओलाई किन कार्यक्रम नदिएको भनेर मन्त्रीले आफूलाई कार्य... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले नेपाल आयल निगममा निकै अनियमिता देखिएको स्वीकार गर्दै विकृति अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । निगमको ४९ औँ वार्षिकोत्सवलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले निगममा जताततै प्वालैप्वाल रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने , “निगममा प्वालैप्वाल परेको छ, तेलमा प्वाल परेपछि कति चुहिन्छ ? ढुवानीकर्ता, ट्याङ्कर चालक, प्रशासक, बिक्रेता, सचिव अनि म... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई विशेष संरक्षण गर्दै औषधिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको औषधि परामर्श परिषद्को १५ औँ बैठकमा औषधिको मूल्य निर्धारण,अनुगमन समिति निर्माण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा औषधि व्यवस्था विभागलाई सुदृढ बनाउन... थप पढ्नुहोस्
किरण पौड्याल इलाम । चिया केका लागि पिइन्छ रु जवाफका लागि पर्खनु पर्दैन, स्वादका लागि । हरेक बिहान अधिकांश नेपालीका घरमा चिया पिइन्छ । धेरैले चिया स्वादकै लागि पिउँछन् । हामीले पिउने चिया पनि आ–आफ्नै छन् । कोही चियामा दूध मिसाएर त कोही नमिसाई । हरेक तरिकाले फरक–फरक स्वाद चियामा पाउन सकिन्छ । हामीले पिउने चिया दुईदेखि तीन प्रकारका छन् भने दाम पनि किलोको दुई सयदेखि एक हजारसम्म । तर इलामको एउटा प्र... थप पढ्नुहोस्
बनेपा । रोशी गाउँपालिकास्थित रोशी खोला आसपासमा क्रसर तथा ढुङ्गाखानी सञ्चालन गरेर भएको प्रदूषणलाई रोक्नका लागि गाउँपालिकाले सो क्षेत्र आसपासका उद्योगीलाई सचेत गराएको छ । बिपी राजमार्गको दायाँबायाँ पर्ने सो गाउँपालिकाको रोशी खोला छेउछाउमा सञ्चालनमा रहेका रोडाढुङ्गा र क्रसर उद्योगबाट निस्कने धुलोका कारण रोशी खोला धमिलो हुनुका साथै सुक्दै गएपछि सिँचाइ अभाव भएकाले वर्षौंदेखि त्यस आसपासका किसानले सास्ती... थप पढ्नुहोस्
व्याजदर बढ्दा संकटमा उद्योग, दबाबमा गभर्नर !
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ब्याजदर वृद्धि गरेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जीवी नेपालको ध्यानकर्षण गराएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नर डा नेपालसँग भेट गरी ऋणको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएको थियो । महासङ्घ... थप पढ्नुहोस्
साना उद्योग विकास समितिको अध्यक्षमा नेपाल
काठमाडौँ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति एकीकृत कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्षमा खगेन्द्र नेपाल चयन भएका छन । समितिको शुक्रबार सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । उपाध्यक्षमा प्रचण्डकुमार न्यौपाने, महासचिवमा मिनराज खडका, कोषाध्यक्षमा कल्पना शर्मा, सचिवमा तारा पोखरेल र सहकोषाध्यक्षमा बलराम अधिकारी निर्वाचित भएका हुन । त्य... थप पढ्नुहोस्